Haysan: Soo kabashada Gaariga WooCommerce Smarter | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Haysan: Soo kabashada Gaariga WooCommerce Smarter
Haysan: Soo kabashada Gaariga WooCommerce Smarter
Gawaarida laga tagay waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun ee aad la macaamili doonto mulkiilaha dukaanka onlaynka ah. Inkastoo aadan si buuxda u baabi'in karin dhibaatada, warka wanaagsan ayaa ah inaad si weyn u yareyn karto tirada gawaarida laga tagay ee aad la tacaaleyso.
Haddii aad u isticmaaleyso WooCommerce si aad ugu iibiso khadka, waxaa jira tiro ka mid ah plugins kala duwan oo la heli karo kuwaas oo kaa caawin kara inaad soo kabsato gawaarida la dayacay. Mid ka mid ah plugin sida waa Retainful iyo in this post, waxaan eegi doonaa waxa plugin uu leeyahay in ay bixiyaan, sababta ay tahay in aad u isticmaasho, sifooyinka aasaasiga ah ee plugin ee sidoo kale faa'iidooyinka iyo khasaaraha.
Waa maxay Retainful?
Retainful waa nidaamka soo kabashada gaadhiga la dayacay (iyo plugin WordPress) kaas oo kaa caawinaya in aad yarayso tirada gaadhiyada la dayacay oo aad ka dhaliso iibsiyada soo noqnoqda ee dukaanka WooCommerce. Marka aad dhaqaajiso plugin-ka, waxa ay qabsan kartaa ciwaannada iimaylka macaamiishaada oo ay keeni kartaa xasuusin iimaylka gaadhiga-gacan oo taxane ah si ay ugu dhiirigeliso inay soo noqdaan oo ay dhammaystiraan iibka.
Sidee U Shaqaysa Haysashada?
Marka isticmaaluhu galo ciwaankooda iimaylka inta lagu jiro habka hubinta, plugin Retainful ayaa qabsan doona. Haddii macaamiishu aanu ku dhamaystirin iibka 30 daqiiqo gudahood, plugin-ku waxa uu soo diri doonaa xasuusin iimayl oo toos ah kaas oo ku dhiirigaliya inay soo noqdaan oo dhameeyaan habka hubinta.
Waxaad u habayn kartaa plugin si aad ugu dirto iimaylo xusuusin dheeraad ah sida:
Soo dir xusuusinta iimaylka ugu horreysa 30 daqiiqo ka dib marka macmiilku ka tago gaadhiga
Soo dir iimaylka labaad 4 saacadood ka dib marka gaadhiga laga tago
Soo dir iimayl saddexaad maalin ka dib marka laga tago gaadhiga oo bixi koodka kuubanka
Soo dir xasuusin kale oo iimayl 2 maalmood ka dib marka gaadhiga laga tago
Retainful waxa ay ku ogolanaysaa in aad horay u abuurto ololayaashan dhibco ee iimaylka waxana la qorsheeyay oo si toos ah loo diri karaa Isla marka gaadhiga la soo helo, iimaylada ayaa joogsan doona.
Waa maxay sababta loo Isticmaalo Joogista?
Sida laga soo xigtay machadka Baymard, celceliska iibsashada gaadhiga wax iibsiga ee internetka waa 69.57%. Si kale haddii loo dhigo, haddii toban macaamiil oo suurtagal ah ay soo booqdaan dukaankaaga oo ay shay ku dhigaan gaadhigooda, todoba ka mid ah weligood ma dhamaystiri doonaan iibsigooda.
Taasi waa dakhli badan oo lumay, gaar ahaan haddii aad leedahay saldhig macaamiil oo yar. Waxaa jira sababo badan oo ay macaamiishu uga tagaan baabuurtooda; laga bilaabo habka hubinta oo aad u adag ilaa khidmadaha dhoofinta lama filaanka ah.
Sidan oo kale, waligaa ma awoodi doontid inaad si buuxda u baabi'iso dhibaatada macaamiishu ma dhamaystirayaan iibkooda. Laakiin waxaad samayn kartaa wax si aad u yareyso. Taasi waa meesha saxda ah ee plugins sida Retainful ay ka soo galaan. Retainful waxay kaa caawin kartaa inaad ka soo kabsato ugu yaraan kala badh gaadhiyada la dayacay adiga oo soo diraya xasuusin email ah oo wakhti fiican leh.
Markaad taas tixgaliso, way fududahay in la arko sababta furaha ka-tagga gaadhiga sida Retainful ay lama huraan u tahay milkiilaha dukaanka eCommerce.
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Joogtada ah
Markaa hadda oo aad ogtahay waxa Retainful yahay iyo sababta ay tahay inaad u isticmaasho, aan eegno sifooyinkeeda asaasiga ah.
Xusuusiyeyaasha iimaylka Gaariga ee la Tagay
Dabiici ahaan, sifada xudunta u ah plugin Retainful waa xasuusinta iimaylka gaadhiga ee la dayacay. Sidii hore loo sheegay, si toos ah ayaa loo kiciyaa oo waxaad u habeyn kartaa in lagu soo diro wakhtiyada cayiman ee doorashadaada.
Iimeyl kasta si buuxda ayaa loo habayn karaa si uu u dhigmo astaantaada waxaadna u soo diri kartaa iimaylka hore ee naftaada si aad u hubiso in wax walba ay shaqeeyaan. Waxaad ku dari kartaa iimaylo badan oo intaad rabto oo aad nuqul ka sameysan kartaa si aad u dedejiso habka dejinta.
Kuuban Dalabka Xiga
Si aad u habayso Kuubboon Dalabkaaga Xiga, waa inaad isticmaashaa dashboardkaaga WordPress. Waxaad u habeyn kartaa kuubanka sida boqolleyda ama xaddi siman. Nidaamyadu waa kuwo toos ah, waxaadna abuuri kartaa tiro aan xadidnayn oo rasiidh ah. Oo haddii aad awood u yeelatid ikhtiyaarka kuubannada in lagu sameeyo dhabarka dambe code coupon gaar ah ayaa loo soo saari doonaa iimaylka macmiil kasta.
Waxaad si buuxda u maamusho badeecadaha ama qaybaha badeecada kuuboonku khuseeyo oo waxaad ka saari kartaa alaabta ama qaybaha qaarkood. Waxa kale oo aad dejin kartaa taariikh gaar ah marka kuubanku dhaco oo aad dejiso kharashaadka ugu yar iyo ugu badan ee loo ogolyahay isticmaalka kuubanka.
Muuqaal kale oo faa'iido leh oo ku saabsan Dalabka Xiga ayaa ah xaqiiqda inaad dejin karto iimaylo dabagal ah. Si la mid ah iimaylada gaadhiga laga tagay, waxaad u dejisan kartaa in lagu soo diro waqtiyo gaar ah wayna baxayaan ilaa macmiilku isticmaalo koodka qiimo dhimista.
Tifaftiraha Iimayl Muuqaal
Plugin-ka Retainful waxa uu leeyahay tifaftire iimaylka muuqaal ah kaas oo dareemaya bog dhisaha. Waxaad ku dari kartaa blocks iimayladaada sida qoraalka, badhanka, sawirada, tiirarka, iyo in ka badan. Plugin-ku waxa uu leeyahay is-jiid iyo jiid jiid markaa waxa kaliya oo ay tahay inaad samayso waa ku jiid qaybta aad rabto iimaylkaaga.
Waxa kale oo aad awood u yeelan kartaa in aad shakhsiyayso iimaylka adiga oo isticmaalaya furaha gaaban ee kala duwan. Ku dar magaca macmiilka, waxa ku jira gaadhiga, coupon iyo in ka badan si aad uga caawiso in aad ka dhaadhiciso macmiilka in ay dhamaystiraan iibsigooda.
Marka laga reebo iimaylada gaadhiga ee la dayacay iyo kuboonnada dalbashada xiga, plugin Retainful waxa uu leeyahay astaamo kale oo qiimo leh oo waxtar leh oo ay ka mid yihiin:
Soo-bax-ujeedka - tus code coupon ama kaliya soo ururi iimaylkooda oo hadhow qabo marka macaamiishu isku dayaan inay ka baxaan dukaankaaga
Waqtiga Tirinta - abuur dareen degdeg ah adiga oo tusinaya wakhtiga kama dambaysta ah ee iibsashada dalab gaar ah
Ku-dar-To-Cart Soo-ururinta Iimayl-ka – U ururi iimaylada macmiilka isla marka ay shay ku daraan gaadhiga si aad u soo ceshato gaadhiyada xataa ka hor inta aanay gaadhin nidaamka hubinta
Retainful waxa kale oo ay bixisaa xog waxtar leh oo aad isticmaali karto si aad u wanaajiso dukaankaaga iyo farsamada soo kabashada gaadhiga. Waxaad heli doontaa faahfaahinta sida alaabta ay macaamiishu kaga tageen gaadhigooda, tirada tooska ah ee inta gaadhi ee la dayacay iyo/ama la soo celiyay, beddelka gaadhiga, xaqiijinta faleebitaanka iimaylka iyo qiimayaasha furan, iyo hufnaanta Dalabka Xiga.
Guud ahaan, plugin Retainful waa fududahay in la isticmaalo. Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo ku rakibaya nooca bilaashka ah ee plugin ka kaydka rasmiga ah. Marka ay shaqeyso, waxaa lagugu soo jeedin doonaa inaad geliso furayaasha API-ga kuwaas oo aad ka heli karto isdiiwaangelinta akoontiga Retainful.
Si aad u habayso iimayladaada gaadhiga ee la dayacay, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho degelka Retainful laakiin interface-ku waa mid casri ah oo fudud in la isticmaalo. Waxaa intaa dheer, waxaa horeyba u jiray 3 emayl gaadhiga la dayacay oo hore loo habeeyey oo aad u isticmaali karto meel bilow ah oo aad u habayn karto si ay u dhigmaan astaantaada.
Qiimaynta Joogtada ah
Plugin-ka Retainful-ka ah waxa lagala soo degsan karaa bilaasha kaydka rasmiga ah ee WordPress. Nooca bilaashka ah wuxuu ku xaddidan yahay 300 xiriiriye iyo taageerada caadiga ah. Nooca pro ee plugin wuxuu leeyahay 3 qorshe oo qiimeed oo laga kala xusho:
starter - Qorshaha Bilowga waxa ku jira ilaa 2000 oo xidhiidh ah, diritaanka iimaylka aan xadidnayn, helida sifooyinka qiimaha leh, daba-galka kuubboonka dalbashada xiga, iyo taageerada iimaylka mudnaanta leh. Qorshahan ayaa diyaar u ah $9/bishii la soo dallaco ama $7/bishii la soo dalaco sannadkii.
Kobaca - Qorshaha kobaca waxaa ku jira wax kasta oo ka socda qorshaha bilowga iyo ilaa 5000 oo xiriir. Waxa kale oo ka mid ah awoodda aad u diri karto iimaylo boggaaga gaarka ah. Qorshahan waxa loo heli karaa $29/bishii la soo dallaco bishii ama $23/bishii la soo dalaco sannadkii.
Professional -Qorshahan waxaa ku jira wax kasta oo ka socda qorshaha kobaca iyo sidoo kale ilaa 25000 oo xidhiidh, taageero wada sheekaysi toos ah, iyo khabiir ku takhasusay dusha sare. Qorshahani wuxuu ku kacayaa $99 bishii la soo dallaco ama $79 bishii la soo dallaco sannadkii.
Gawaarida la dayacay ayaa dhibaato weyn u ah milkiilayaasha dukaamada online-ka ah, laakiin iyadoo la kaashanayo plugin sax ah, waxaad yareyn kartaa tirada gawaarida laga tagay dukaankaaga. Retainful waxa ay soo bandhigtaa astaamo faa'iido leh sida iimaylada gaadhiga ee la dayacay iyo sidoo kale dalabka xiga ee kuuban oo aad u isticmaali karto inaad ku dhiirigeliso booqdayaasha inay dhameeyaan nidaamka hubinta iyo sidoo kale ku sasab inay ku soo noqdaan dukaankaaga.
Guud ahaan, plugin waa sahlan tahay in la isticmaalo oo xitaa waxay leedahay qorshe bilaash ah si aad u bilowdo sidaas darteed hubaal waa u qalantaa inaad hubiso oo aad aragto sida ay kuugu caawin karto hagaajinta xariiqda hoose.
Shirwaynaha WP Engine/2020 wuxuu bilaabmayaa Juun 10-keeda
The WordPress Hooks Bootcamp: Sida loo Isticmaalo Ficilada, Shaandhaynta, iyo Qaboojiyaha Gaarka ah